Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Betsaka ny sidina Pegasus UK mankany Torkia izao rehefa misokatra i Turkey
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao farany momba ny UK
Pegasus dia namerina ny sidina mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul Sabiha Gökçen avy any London Stansted, miaraka amin'ny sidina indroa isan'andro amin'ny 14:40 sy 00:05 miala ny seranam-piaramanidina London Stansted, ary miverina avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul Sabiha Gökçen amin'ny 11:35 sy 21:00.
Rehefa misokatra indray i Torkia, Pegasus Airlines dia manolotra sidina bebe kokoa avy any London Stansted sy Manchester.
Pegasus dia manidina any amin'ny toerana misy ny masoandro, anisan'izany Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir, Istanbul ary bebe kokoa any Torkia sy ny sisa.
Manoloana ny fanambarana vaovao namerenana an'i Torkia ho ao anaty lisitra amber, i Pegasus dia nahita fitomboana matanjaka tamin'ny famandrihana ho any Torkia avy any Angletera.
Rehefa nivadika ho fararano ny fahavaratra dia mankanesa any amin'ny filentehan'ny masoandro, morontsiraka fasika ary fitsangatsanganana tsy misy vahoaka. Taorian'ny fanambarana fa nifindra tany amin'ny lisitra amberin'i Angletera i Torkia tamin'ny 22 septambra 2021, nanitatra ny fandaharam-potoananany sy ny isan'ny sidina mivantana avy any London Stansted sy Manchester ho any Torkia sy any ivelany i Turkey.
Pegasus dia namerina ny sidina mivantana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul Sabiha Gökçen avy any London Stansted, miaraka amin'ny sidina indroa isan'andro isan'andro amin'ny 14:40 sy 00:05 miala ny seranam-piaramanidina London Stansted, ary miverina avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul Sabiha Gökçen ao amin'ny 11:35 sy 21:00. Ny sidina dia amidy amin'ny £ 49.99 lalana tokana. Ny sidina mivantana intelo isan-kerinandro dia miasa ihany koa ankehitriny avy amin'ny seranam-piaramanidina Manchester mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Istanbul Sabiha Gökçen, miainga amin'ny 12:50, miaraka amin'ny sidina miverina miverina avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul Sabiha Gökçen amin'ny 09:45 (mihatra ny ora eo an-toerana). Ny saran-dalan-tokana avy any Manchester dia amidy ankehitriny avy amin'ny £ 74.99. Ireo zotra roa ireo dia manome fifandraisana mandroso tsara manerana ny tamba-jotra Pegasus misy toerana 36 any Torkia, ao anatin'izany ireo toeram-pialan-tsasatra malaza manaparitaka ny kolontsaina sy ny fialan-tsasatra, toa an'i Bodrum, Dalaman ary Antalya - ary koa ireo toerana 83 hafa iraisampirenena.
Pegasus Airlines'Ny fandaharam-potoana nitarina dia misy sidina mivantana dimy heny isan-kerinandro manomboka amin'ny 21 Oktobra eo anelanelan'ny London Stansted sy Izmir, any amin'ny morontsirak'i Aegean any Torkia, miaraka amin'ny sidina 12:55 miala an'i London Stansted, ary ny sidina miverina miala ny seranam-piaramanidina Izmir Adnan Menderes amin'ny 10:05 (ora eo an-toerana mampihatra). Ny sidina mivantana mankany Izmir dia amidy ankehitriny avy amin'ny £ 59.99. Pegasus koa dia hanomboka sidina mivantana eo anelanelan'ny London Stansted sy Antalya ho an'ny ririnina amin'ny 20 Oktobra.
Pegasus Airlines CCO, Güliz Özturk dia nilaza hoe: "Manoloana ny fanambarana vaovao namerenana an'i Torkia ho ao anaty lisitra amber, hitantsika ny fitomboan'ny famandrihana mankany Torkia avy any Angletera, ary ho setrin'ny fitomboan'ny fangatahana sy ny faniriantsika ny dia fararano, dia ' Faly koa izahay fa hanitatra ny fandaharan'asan'ny sidina avy any London Stansted sy Manchester mankany Torkia, miaraka amin'ny fifandraisana tsara manerana ny tamba-jotra misy ny toerana 119 any amin'ny firenena 44 - midika izany fa ny mpitsangatsangana dia hanana safidy betsaka kokoa amin'ny safidy famandrihana malalaka amin'ny fararano sy ririnina. Mikasa ny hampitombo bebe kokoa ny sidina avy any Angletera izahay amin'ny fararano raha toa ka mitombo hatrany ny fangatahana, ary manantena fatratra ny fandraisana ireo vahiny ao an-tsambo izahay satria manomboka misokatra indray ny dia. ”
Ary koa tambajotra midadasika any Torkia, Pegasus Airlines koa dia manidina amin'ny toerana 119 any amin'ny firenena 44, ao anatin'izany ny toerana itodiana toa an'i Dubai, Tel Aviv ary Sharm el-Sheikh, izay manolotra sidina mivantana mora vidy sy fifandraisana tsy misy tambiny amin'ny iray amin'ireo fiaramanidina tanora indrindra eropeana .
Ny laharam-pahamehan'ny Pegasus dia ny fahasalamana sy ny fiarovana, miaraka amin'ny fepetra fiarovana Covid-19 feno miaraka amin'ny sarontava takiana ao anaty sambo. Pegasus koa dia iray amin'ireo kaompaniam-piaramanidina lafo vidy voalohany eran-tany nanandrana ny fampiharana Travel Pass fanamarinana mifandraika amin'ny fahasalamana IATA ary manolotra fiakarana tsy misy fifandraisana sy kitapo mihintsy miaraka amin'ny Express Kiosks any Tiorkia ilay zotram-piaramanidina.